Otú nyefee iPhone Music ka iTunes na Ratings & Play mkpa
> Resource> iTunes> Olee otú iji Detuo iPhone Music Ratings & Play mkpa ka iTunes
"iPhone adịghị mmekọrịta play adabere na Anyela azụ iTunes mgbe m na-eji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ nyefee music si iPhone ka iTunes. m na-eche ọ bụla okorobịa mara dị otú ahụ ụdị nsogbu na-enye ngwọta. Achọghị m ka m na-atụfu ọ bụla Ama n'ihi na ndị a songs na-egwu egwu ha na m PC. "-Mirabelle
Ọ bụrụ na ị dị ka n'elu onye ọrụ ndị nwere ike ghara inwe songs Fim na-egwu na-adabere anya iPhone ka iTunes, ọ ga-eweta gị ụfọdụ nsogbu na-enwe music ma na PC na iPhone. Ke ibuotikọ emi, anyị na-eso gị ụzọ dị mfe iji idetuo iPhone music ka iTunes na Fim na play adabere. Na-agụ na iji na-enweta ihe ngwọta.
Wondershare TunesGo (Windows) bụ ngwá ọrụ na anyị na-aga na-eji nyefee songs si iPhone ka iTunes na music Fim na-egwu na-adabere. Ọ bụ ọkachamara ngwá ọrụ nke na-akpan mere maka ọrụ nyefee music n'etiti iOS ngwaọrụ na PC. Na ya, mgbe a na-edegharị music ka iTunes, music Fim na play adabere na-depụtaghachiri dị ka mma. Ugbu a ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na fọrọ nke nta niile na-ewu ewu Windows arụ ọrụ usoro. Lee nkọwa ebe a.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPhone na PC
Jiri eriri USB na iPhone abịa na jikọọ iPhone na PC na ẹkedori TunesGo. Nke a iPhone ngwá ọrụ ga-chọpụta gị iPhone na-egosipụta na iPhone Ama ke akpan window dị ka n'okpuru screenshot.
Wondershare TunesGo-akwado ndị niile iPhone ụdị na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 5 na iOS 6. The naanị ihe ị kwesịrị ịgba mbọ hụ bụ na ị na-na na na arụnyere iTunes na kọmputa gị n'ihu na-eji TunesGo. Nke a iPhone ngwa na-arụ ọrụ mgbe iTunes arụnyere.
Nzọụkwụ 3. Nyefee music si iPhone ka iTunes na Fim na play adabere
Site n'aka ekpe nke isi window, ị pụrụ ịhụ "Media" ihe. Pịa Media, na New window, pịa Music. Họrọ chọrọ music, na pịa Mbupụ na> Mbupụ na iTunes Library.
naanị mgbe music na-agafere iTunes Library, music Fim na play adabere ga-depụtaghachiri ka iTunes Library dị ka mma. Ọ bụrụ na ị idetuo music ka a Obodo nchekwa na kọmputa gị, mgbe ahụ, ị ga-ida music fim na-egwu ọnụ.
Lee otú mfe ọ bụ nyefee music ka iTunes Library na music fim na play ọnụ. Na otú a, ị ga-jikwaa gị kasị mmasị ma ọ bụ na-na-mmasị songs mfe na conveniently.
Nyefee iTunes Library ka New Computer